20 Xayawaanada Ugu Lacagta Badan | Wadamada Ugu Fiican | Wareegga Maalka
Bogga ugu weyn 13 Xayawaanada ugu Mushaharka Badan | Dalalka Ugu Fiican
isha sawirka: www.variety.com
An animator waa farshaxan muuqaal ah oo sameeya sawirro taxane ah oo loo yaqaan 'frames', markii lagu muujiyo isku xigxig deg deg ah, abuuraya dhalanteed dhaqdhaqaaq loo yaqaan animation. Rajada mushaharku aad ayey u sarreysaa oo qofku wuxuu noqon karaa mid ka mid ah animators-ka ugu mushaarka badan.
Xayawaanadu waxay ka shaqeeyaan warshado kala duwan, oo ay ku jiraan filimada, telefishanka, iyo ciyaaraha fiidiyaha.
Sababtoo ah animation-ku aad ayuu ugu xidhan yahay filim-qaadista, filim-qaadistuna aad bay u xoog badan tahay, shaqooyinka xusid mudan waxay u baahan yihiin wadashaqaynta animators badan.
Farsamooyinka loo adeegsado in lagu abuuro muuqaalada ama muraayadaha qayb animation ah waxaa go'aamiya qaabeeyayaasha farshaxanleyda iyo goobta ay ka shaqeeyaan.
Filimada Animation-ka ah waxay wadaagaan dhowr boos oo shaqaale filim ah oo leh aflaanta tooska ah, sida agaasimayaasha, soo saarayaasha, injineerada dhawaaqa, iyo tifaftireyaasha, laakiin si weyn ayey u kala duwan yihiin, taas oo ah, uma baahna inta badan boosaska shaqaalaha ee lagu arko muuqaal ahaan. inta badan taariikhda animation.
Animator-ka ugu muhiimsan wuxuu qabtaa qaabeynta iyo animation-ka labadaba wax soo saarka animation-ka Japan ee gacanta lagu sawiray, sida filimada Hayao Miyazaki.
Jabaan gudaheeda, kiciyeyaasha qaarkood, sida Mitsuo Iso, waxay aqbalaan mas'uuliyadda buuxda ee taxanahooda, iyaga oo ka dhigaya wax ka badan kaliya animator-ka weyn, iyagoo muujinaya inay animator ahaan mudan yihiin.
Miyuu mudan yahay nooleyaashu? Mushaar fiican ma helaan?
Iyada oo ku saleysan mushaharka 57, Animator heer-bilow ah oo ka yar 1 sano oo khibrad ah ayaa filan kara inuu sameeyo $ 50,290 wadarta magdhow. Tan waxaa ka mid ah talooyin, gunno, iyo mushahar dheeraad ah
Sidoo kale, Animators mustaqbalkiisa hore leh 1-4 sano oo waayo-aragnimo ah waxay helaan celcelis ahaan wadarta mushaharka $ 55,264. Animator-xirfad-yaqaan ah oo leh 5-9 sano oo waayo-aragnimo ah wuxuu celcelis ahaan mushahar ahaan u qaataa $ 62,459 sanadkiiba.
Ugu dambeyntiina, Xayawaannada qibrada leh ee leh khibradda 10-19 sano waxay helaan celcelis ahaan mushahar dhan $ 73,991. Shaqaalaha xirfadooda dambe (20 sano ama ka badan) waxay kasbadaan celcelis ahaan mushahar dhan $ 58,911 sanadkii.
Sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha (BLS), celceliska mushaarka animators ee 2017 wuxuu ahaa $ 70,530 sanadkii. Celceliska qaranka, sida laga soo xigtay Glassdoor, wuxuu ahaa $ 74,000.
Magdhawga kuwa nooleyaasha ah, sida shaqooyin kale oo badan, waxay ku saleysan tahay heerka khibradda. Sidaa darteed, maahan wax aan caadi ahayn in animators-ka heerka sare ah ama agaasimayaasha farshaxanka ay si fiican ugu galaan lixda tirooyin.
In ka badan 59 boqolkiiba dhammaan kuwa nooleyaasha ah ayaa iskood u shaqaystay 2017. Sida laga soo xigtay BLS, jagooyin badan oo dhaqdhaqaaq oo joogto ah ayaa jira oo kaliya inta mashruuc la sameeyay.
Waa suurtogal in la helo xirfad animation oo muddo-dheer ah, laakiin waa ka abaal-marin badan tahay haddii aadan ka fikirin raadinta riwaayado oo had iyo jeer kobciso kartidaada.
Xaqiiqooyinka iyo miisaanka mushaharka la bixiyo, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa u shaqeynta animator ahaan inay si fiican u bixiso, waxaadna u badan tahay inaad ka mid noqotid kuwa ugu mushaarka badan gobolka, ha noqoto waqti buuxa, sida freelancer, ama animation daqiiqadii ugu dambeysay mashruuc
Sida loo noqdo animate
Noqoshada animator waa shaqo fantastik ah oo kuu oggolaaneysa inaad sawirro iyo fikrado u keento nolosha wershadaha sida kaladuwan sida sharciga, daryeelka caafimaadka, shineemooyinka, waxbarashada, telefishanka, iyo ciyaaraha.
Sii wad akhriska si aad wax uga baratid geeddi-socodka loo baahan yahay si loo noqdo animator iyo sida loogu jabiyo ganacsigan xawaaraha badan, xiisaha badan.
1. Tixgeli qaadashada casharada animation -ka ama isqorista barnaamijka shahaadada:
Dadka intiisa badan, imaanshaha dugsigu waa tallaabada ugu horreysa ee aad ku noqonayso animator-ka kaliya ee waa mid ka mid ah animators-ka ugu mushaharka badan.
Shaqooyinka farshaxanka badan iyo farshaxanleyda ayaa sida caadiga ah u baahan shahaadada koowaad ee jaamacadda, sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha Mareykanka.
Dabcan, barnaamijka animation -ka ee aad doorato waa inuu ku salaysnaadaa ujeeddooyinkaaga xirfadeed ee gaarka ah, waxbarashadii hore, iyo xirfadahaaga.
Barnaamijyada shahaadada Associate iyo bachelor, iyo sidoo kale barnaamijyada aan shahaadada ahayn sida barnaamijyada shahaadada iyo diblooma, ayaa la heli karaa.
Barnaamijyada aan shahaadadu ahayn waxay diiradda saaraan takhasusyo gaar ah waxayna u baahan karaan xirfado hore ama aqoon meelo gaar ah.
Barnaamijyada shahaadada sida caadiga ah waxay bixiyaan waxbarasho ballaadhan, oo ka guuraysa koorsooyin aasaasi ah, halka barnaamijyada aan shahaadada ahayn ay diiradda saaraan takhasusyo gaar ah oo laga yaabo inay u baahdaan xirfado hore ama aqoon meelo gaar ah.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, dooro barnaamij ku siinaya gacan qabasho aad ugu qaadatid teknoolojiyadaha warshadaha waxaana ku baraya khubarada warshadaha
2. Samee ballan u qaadista hagaajinta awoodahaaga.
Macalimiintaadu waxay kaliya ku bari karaan wax badan oo ku saabsan sida loo noqdo animator, iyadoon loo eegin sida cajiibka ah ee barnaamijkaaga animation-ka uu yahay.
Waxay kugu dhiirri gelin karaan inaad sida ugu fiican wax u qabato, laakiin waa inaad weli dadaal samaysaa.
Waxaad u baahan doontaa inaad ka shaqeyso jilitaanka iyo awoodaha indho-indheynta ka sokow horumarinta xirfadaha fanka ee asaasiga ah iyo maaraynta animation iyo qalabka tafatirka. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad fahamto luqadda jidhka iyo dhaqdhaqaaqa, taas oo kuu ogolaanaysa inaad dib u abuurto dareeno gaar ah iyo muuqaalada jilayaashaaga.
Qodob kale oo muhiim ah ayaa ah wada shaqaynta kooxda. Waxaad ubaahantahay inaad ku tababarto xubin kooxeed wanaagsan iyo maaraynta jawaab celinta iyo canbaareynta mashaariicda animation, waxaadna ubaahan doontaa inaad ku tababbartid inaad xubin fiican ka noqoto kooxda iyo maaraynta jawaab celinta iyo dhaliisha
3. Samee faylalka tacliinta sare iyo demo reel:
Haddii aad weydiiso shaqaale warshadeed sida loo noqdo animator, waxay kuu sheegi doonaan inaad yeelato faylalka tacliimeed ee wanaagsan / wanaagsan ay muhiim tahay.
Dhismaha qaybaha faylalka waa qayb muhiim ah oo manhajka ka mid ah barnaamijyada Farshaxanka & Animation-ka ee Machadyada Farshaxanka.
Waxaa u fiican animators -ka in boorsooyinkooda lagu dhajiyo internetka, halkaas oo ay ku yeelan karaan qayb loogu talagalay demo -gaaban gaaban iyo mid kale oo loogu talagalay shay -baarka shaqada ee dheer.
Qayb kasta oo aad wadaagto waa in ay ku jirtaa oo kooban shaqadaada iyo ujeedooyinka mashruucaaga. Kaliya tus shaqadaada ugu fiican oo hayso faylalkaaga oo dib u cusboonaysii markaad horumarinayso qaybo cusub oo ka wanaagsan.
Xusuusnow inaad ku darto aagga xiriirka, iyo sidoo kale CV -gaaga iyo sharraxaad kooban oo ku saabsan waayo -aragnimadaada iyo hiwaayadahaaga, mareegahaaga.
Waxaad ku heli kartaa fikrado faylaleed adiga oo eegaya faylalka online-ka ee animators ama, haddii aad wali ku jirto dugsiga, weydii shaqaalahaaga Adeegyada Shaqada iyo macalimiinta ra'yi-celin iyo talooyin.
4. Hel khibrad shaqo oo kala duwan:
Shaqo barasho iyo shaqo xor ah ayaa kaa caawin kara inaad waayo-aragnimo ka hesho meel ka baxsan fasalka inta aad weli ku jirto dugsiga. (Macalimiintaada ama Adeegyada Shaqada ayaa laga yaabaa inay ku xidhaan xirfadlayaasha warshadaha ee hadda jira.)
Xitaa haddii aad hesho shaqo waqti-buuxa ah qalin-jabinta ka dib, waxaad u badan tahay inaad ku bilowdo sidii heer-sare soosaare animator ah marka loo eego sida hoggaamiye animator. Waxaa laga yaabaa inaad wali rabto inaad qabato xoogaa shaqo bilaash ah ama iskaa wax u qabso ururada aad daryeesho intaad ka shaqeyneyso inaad sare u qaaddo xirfaddaada.
Dhammaan aqoontani waxay kaa caawin kartaa inaad la xiriirto khubaro kale, hagaajiso kartidaada, oo aad ballaariso faylalkaaga.
Xasuusnoow in wakhti iyo dadaal la geliyo sidii loo horumarin lahaa looguna guulaysan lahaa animator ahaan ay qayb weyn ka tahay habka loo noqdo mid ka mid ah kuwa ugu mushaharka badan animators.
Wadamada ay ka helayaan xayawaanada ugu mushaarka badan
Dalka Mareykanka, celceliska magdhawga guud ee dhaqdhaqaaqayaasha waa $ 47,706, oo u dhiganta $ 23 saacaddii. Waxay kaloo helaan gunno celcelis ahaan ah $ 1,217.
Qiyaasaha mushaharku waxay ku saleysan yihiin xogta sahanka mushaharka ee Mareykanka si toos ah looga helo ganacsiyada iyo shaqaalaha aan la aqoon.
Celceliska dakhliga soo-galayaasha heerka gelitaanka (oo leh khibrad 1-3 sano ah) waa $ 35,380.
Animator sare (8+ sano oo waayo-aragnimo ah), dhanka kale, wuxuu sameeyaa celcelis ahaan $57,948 sanadkii, taasoo ka dhigaysa Mareykanka lambarka koowaad ee gobolka ugu mushaarka badan.
Australia dhexdeeda, celceliska animator-ku waxa uu helaa magdhow guud oo ah $61,053 sanadkii ama $29.50 saacadiiba. Waxa kale oo ay helaan celcelis ahaan $1,557 gunno ah.
Qiyaasaha mushaharku waxay ku salaysan yihiin xogta sahanka mushaharka oo si toos ah looga qaatay loo -shaqeeyayaasha Australia iyo shaqaalaha aan la garanayn.
Celceliska magdhawga animator-ka heerkiisu yahay (oo leh 1-3 sano oo khibrad ah) waa $ 45,352.
Dhaqaale sare (8+ sano oo waayo-aragnimo ah), dhanka kale, wuxuu helaa celcelis ahaan dakhli dhan $74,281, ama 54343.98 US dollars, taasoo ka dhigaysa Australia gobolka labaad ee ugu sarreeya oo leh animators ugu mushaarka badan.
Kanada, celceliska gunnada guud ee animator-ku waa $52,784 sannadkii ama $25 saacaddii. Waxa kale oo ay helaan celcelis ahaan $1,346 gunno ah. Qiyaasta mushaharku waxay ku salaysan tahay xogta sahanka mushaharka ee shakhsiyaadka iyo ganacsiyada aan la garanayn ee Kanada.
Celceliska dakhliga soo gala animator-ka (oo leh 1-3 sano oo waayo-aragnimo ah) waa $39,146. Animator-ka heerka sare ah (8+ sano oo waayo-aragnimo ah), dhanka kale, wuxuu helaa celcelis ahaan dakhli dhan $64,116, ama 50584.81 US dollars, taasoo ka dhigaysa Kanada gobolka saddexaad ee ugu sarreeya oo leh animators ugu mushaarka badan.
Japan gudaheeda, animator-ka caadiga ah wuxuu qaataa mushaar dhan 4,365,377 yen saacadiiba, ama $ 2,099. Waxay sidoo kale helaan celcelis gunno ah 111,317 dollars.
Qiyaasaha magdhowgu waxay ku saleysan yihiin xogta si toos ah looga helay loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha aan la aqoon ee ku nool Japan iyada oo loo marayo sahaminta mushaharka.
Celceliska dakhliga soo-galayaasha heerka gelitaanka (oo leh khibrad 1-3 sano ah) waa $ 3232,678.
Animator-ka heerka sare ah (8+ sano oo waayo-aragnimo ah), dhanka kale, wuxuu helaa celcelis ahaan mushahar dhan $5,294,674, ama 48046.25 US dollars, taasoo ka dhigaysa japan gobolka afraad ee ugu sarreeya ee leh animators ugu mushaharka badan.
Faransiiska, celceliska mushaharka guud ee animator waa 32 265 Euros ama €16 saacaddii. Waxa kale oo ay helaan celcelis ahaan gunno dhan 823 Euro. Qiyaasta mushaharku waxay ku salaysan tahay xogta si toos ah looga helay loo-shaqeeyayaasha iyo shaqaalaha aan la garanayn ee Faransiiska inta lagu jiro sahan mushahar.
Celceliska dakhliga soo-galayaasha heerka gelitaanka (oo leh khibrad 1-3 sano ah) waa 23 915 Euros.
Animator sare (8+ sano oo waayo-aragnimo ah), dhanka kale, wuxuu sameeyaa celcelis ahaan mushaharka 39 169 Euros, ama 46080.57 US dollars, taasoo ka dhigaysa Faransiiska gobolka shanaad ee ugu sarreeya ee leh animators ugu mushaharka badan.
6. Boqortooyada Ingiriiska (UK).
Celceliska mushaharka guud ee animate -ka Boqortooyada Ingiriiska waa £ 27,227, ama £ 13 saacaddii. Waxay kaloo helayaan £ 694 gunno celcelis ahaan.
Tani waa qiyaasaha mushaarka ee ku saleysan xogta sahanka mushaarka ee Boqortooyada Ingiriiska oo si toos ah looga helay loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha aan la aqoon.
Celceliska magdhawga animator-ka heerka gelitaanka (oo leh khibrad 1-3 sano ah) waa £ 20,192.
Dhaqaale sare (8+ sano oo waayo-aragnimo ah), dhanka kale, wuxuu helaa celcelis ahaan dakhli gaaraya £33,072, ama 45092.18 US dollars, taasoo ka dhigaysa UK gobolka lixaad ee ugu sarreeya oo leh animators ugu mushaarka badan.
Akhri: Waa Kuwee Naqshadayaasha Ciyaaraha Fiidiyowga Ugu Lacagta Badan? | Dalalka Ugu Fiican
Shiinaha dhexdiisa, celceliska magdhawga guud ee animatorku waa ¥ 126,041, ama ¥ 61 saacaddii. Waxay sidoo kale helaan gunno ah ¥ 3,214 celcelis ahaan.
Qiyaasta mushaharka badanaa waxay ku saleysan tahay xogta si toos ah looga helo loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha aan la aqoon ee ku nool Shiinaha inta lagu guda jiro baaritaanada mushaarka.
Celceliska dakhliga animator heer-gal ah (oo leh khibrad 1-3 sano ah) waa ¥ 94,483.
Animator sare (8+ sano oo waayo-aragnimo ah) wuxuu kasbadaa celceliska dakhliga ¥154,750 ama $23907.00 doolarka Maraykanka, taasoo ka dhigaysa Shiinaha gobolka toddobaad ee ugu sarreeya oo leh animators ugu mushaarka badan.
13 Xayawaanada ugu Mushaharka Badan
Kuwani waa animators adduunka ugu mushaarka badan.
Maxaa kale oo laga sheegi karaa boqorkii animation qarnigii labaatanaad? Shaki la'aan, Walt Disney waa animator-ka ugu caansan adduunka.
Magaciisu waxa uu noqday mid si aan kala go' lahayn ugu xidhan animation. Waxaa jira dokumentiyo badan oo ku saabsan shaqada Walt Disney marka loo eego qof kasta oo kale. Lagama tagi karo liiskan. Iyadoo aan la xusin xaqiiqda ah in studio-ga animation-ka ee uu aasaasay uu weli si xoog leh u socdo oo uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan adduunka.
Isagu waa halyeey, oo dhaxalkiisuna wuxuu ku dul wareegi doonaa warshadaha animation qarniyo.
Shirkadda Walt Disney hadda waxaa la saadaalinayaa inay qiimihiisu dhan yahay $ 74.9 bilyan, waxayna sii wadaa inay soo saarto filimo guur-guura oo ku guuleysta abaal-marinta iyo filimada.
2. Matt Stone iyo Trey Parker:
Trey Parker iyo Matt Stone waxay aruursadeen lacag dhan $ 800 milyan in ka yar 20 sano, sitcom kartoonkii weynaa ee sitcom oo iyaga u kaxeeyay xagga sare ayaa weli xoog leh.
South Park, oo laga sii daayo Comedy Central, waxay ka soo baxday labada gaaban ee gaaban ee labada nin laga bilaabo 1992 ilaa 1995. Bandhiga ayaa lagu dhaleeceeyay inuu yahay wasakh iyo muran badan, haddana dad badan ayaa u arka madadaalo.
Sida laga soo xigtay IMDB, bandhigga ayaa loo magacaabay in ka badan darsin Primetime Emmy Awards tan iyo markii la bilaabay 1997, isagoo ku guuleystay shan ka mid ah.
AFI, Annie, iyo CableACE Awards ayaa dhammaantood la siiyay bandhigga.
Matthew Abram "Matt" Groening waa abuuraha "The Simpsons".
Intaa waxaa dheer, wuxuu u qalmaa $ 500 milyan, soo saaraha shaashadda / majaajiliistaha / TV-ga ayaa ku guuleystay abaalmarino badan oo Emmy Awards ah, iyo sidoo kale kala soocida "taxanaha wakhtiga ugu dheer ee ugu dheer", kaas oo uu ku guuleystay 2009 ka dib Gunsmoke.
Groening sidoo kale waa abuuraha taxanaha animated ee Futurama, kaas oo ku guulaystay Emmy ee barnaamijka fir fircoon ee 2011. Laakiin, ku soo noqoshada Simpsons, dhacdadii 20-guurada ee Janaayo 2010 ayaa soo jiidatay in ka badan 20 milyan oo daawadayaal ah.
Taasi waa waxa aad ugu yeerto ku-talagal soo socda.
Kartoonada caanka ah ee ay soo saareen William Hanna iyo Joseph Barbera, oo loo yaqaan Hanna-Barbera, waxaa ka mid ah Tom iyo Jerry, Scooby-Doo, iyo The Flinstones.
Hanna-Barbera waxaa la asaasay 1957-kii laba saaxiib oo kulmay markii ay ka shaqaynayeen Studio-yada MGM. Wakhti kuma lumin inay samaystaan ​​iskaashi.
Ruff iyo Reddy Show iyo The Huckleberry Hound Show, oo labaduba ku guuleystey Emmy Awards, ayaa ahaa shaqadii ugu horeysay ee istuudiyaha.
Qaar ka mid ah kartoonnada Hanna-Barbera ee aannu ugu jecelnahay ayaa ka dhigay shaashadda weyn, oo ay ku jiraan Flinstones, oo gebi ahaanba ahaa fal toos ah, iyo Scooby-Doo, oo lahaa isku-dar ah animation iyo ficil-toos ah.
In kasta oo xaqiiqda ah in William Hanna iyo Joseph Barbera aysan hadda noolayn (waxay noolaayeen 90 iyo 95 sano jir, siday u kala horreeyaan), astaamahoodu waxay ku nool yihiin mahadnaqa Warner Bros. Animation (WBA), guuto taageerayaal u heellan, Cable, YouTube, iyo warbaahin kasta oo kale oo u dhaxaysa.
Waxay haystaan ​​wadar dhan $ 300 milyan oo doolar.
Halkeed joogtay haddii aadan maqlin SpongeBob SquarePants? Squarepants ma aha si fudud sawir-gacmeed; waa ganacsi caalami ah oo balaayiin dollar ku kacayo.
Marka loo eego Da'da Xayeysiinta, Boqortooyada SpongeBob SquarePants waxay leedahay in ka badan 700 oo shuraako shati ah oo caalami ah, oo leh SpongeBob SquarePants: Filimka oo keliya ayaa soo xareeyay $86 milyan.
Haddaba, muxuu faa’iido u leeyahay abuuraha waxyaalahan oo dhan? Lacag dhan $ 90 milyan. Uma xuma qof bari jiray bayoolojiga badda.
Akhri: 10ka Kulliyadood ee ugu Fiican Bayoolajiga Badda ee Adduunka
Seth Woodbury MacFarlane wuxuu haystaa qiimahiisu yahay $ 55 milyan oo doolar ahaan jilaa, animator, qoraa, soo saare, agaasime, majaajiliiste, iyo heesaa. Wuxuu caan ku yahay abuurista, soo saarida, iyo qorida magac weyn oo caan ah oo loo yaqaan 'sitcom Family Guy'.
MacFarlane ayaa ku dhawaaqaya jilayaal badan oo barnaamijka ku jira. Midda ugu caansan waa Stewie Griffin, oo ah canug si jeesjees ah u hadlaya oo leh lahjad Ingiriis ah. Waxa kale oo uu jilaa Stewie aabihiis, Peter Griffin, iyo eyga qoyska, Brian Griffin.
MacFarlane waxa uu leeyahay dhawr bandhig oo kale oo suunka hoostiisa ah, oo ay ku jiraan Aabaha Maraykanka iyo Bandhiga Cleveland. Animator-ku wuxuu kaloo qoray Ted iyo Ted 2.
Hayao Miyazaki, oo u dhashay dalka Japan, ayaa sameeyay oo soo saaray qaar ka mid ah filimada anime-ka ee ugu muhiimsan. Isagu waa aasaasihii Studio Ghibli wuxuuna maamulaa ku dhawaad ​​kala badh filimada jilibka ee lacagaha ugu badan soo xareeyo.
Qaar badan oo filimadaas ka mid ah, sida Ruuxi Aruuriga ah iyo Qalbiga Dhaqaaqa ee Howl, shaki kuma jiro inaad adigu taqaan. Waxay xooga saaraan walxaha khiyaaliga ah waxayna aad ugu dadaalaan inay keenaan fikradaha nolosha ee aadan ku arki doonin filimada kale ee xiisaha leh. Tani waa sheegashada Miyazaki inuu caan noqdo, waana la xusuusan doonaa tobanaan sano oo soo socda.
Isagoo haysta hanti dhan 50 milyan oo dollar, waa mid ka mid ah dadka ugu qanisan adduunka. Sidoo kale, mid ka mid ah animators ugu mushaarka badan.
Genndy Tartakovsky, oo ah noole ruushka ku dhashay, waa ruug cadaa ka tirsan Shabakadda Kartoonka, isagoo abuuray dhowr taxane oo firfircoon.
Isagu waa abuuraha iyo agaasimaha shaybaarka Dexter iyo Samurai Jack, iyo sidoo kale asalka asalka ah ee 'Star Wars: Clone Wars'.
Shaqadiisu waa mid aan la dafiri karin oo caan ah, wuxuuna leeyahay hibo animation ah. Qaabkiisa farshaxanimo waa mid kala duwan, laakiin waa hibada uu u leeyahay sheeko-sheegista iyo jihaynta taas oo ku kasbatay inuu ku amaano warshadaha animation-ka.
Wuxuu leeyahay qiimo lacageed oo gaaraya 10 milyan oo doolar.
Taxanahiisa Nickelodeon Ren & Stimpy waa shaqadiisii ​​ugu caansanaa, laakiin waa qaab-dhismeedkiisii ​​iyo qaab-dhismeedkiisii ​​animation ee saamaynta ugu weyn ku yeeshay meheradda.
Boggiisa farshaxanka, wuxuu hayaa macluumaad faro badan oo loogu talagalay animators cusub iyo xilli ciyaareedba.
Ku-biiridiisa boqortooyada animation-ka ayaa saameyn ku yeeshay qaababka farshaxan ee kartoono badan oo casri ah.
Qof kasta oo ku koray 1980-meeyadii ama 1990-meeyadii wuxuu xasuusan doonaa ren &. Kuwani waa noocyada farshaxan-gacmeedyada ee saameynta joogtada ah ku leh bulshada iyo warshadaha animation.
Hantidiisa oo dhan 10 milyan oo doolar, wuxuu ka mid yahay dadka adduunka ugu taajirsan.
David Feiss waa shaqsiga ugu caansan liiskan sababta oo ah qaab -dhismeedkiisa dhaqdhaqaaqa iyo dareenka kaftanka, kaas oo gacan ka geystey sameynta Studio -yada Cartoon Network.
Cow & Digaag ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee muuqaalka Shabakadda Kartoonada ah, waxayna albaabka u fureen in la laayo dad kale oo raacaya. Waa la siiyay, ma aha taxanaha ugu caansan ama caan ka ah suuqa.
Feiss, dhinaca kale, wuxuu abuuray afar xilli oo bandhig ah oo caan ka ahaa carruurta. Farsamadiisa animation waxa kale oo loo adeegsaday xayaysiisyada uu ka caawiyay abuurista.
Qiimaha saafiga ah ee u dhexeeya $ 1 iyo $ 5 milyan, runtii waa wax cajiib ah!
Halyeey kale oo Shabakadda Cartoon-ka ah, iyo aabbaha saddex carruur ah oo ku raaxaystay waqti-dhaafka dembiilaha, ayaa halkan jooga.
Danny Antonucci waa ruug -cadaa ruug -caddaa ah oo shaqadiisa bilaabay isagoo yar. Dhalinyarnimadiisii ​​dambe, wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo Hanna-Barbera wuxuuna aakhirkii ka soo dhex baxay darajooyin si uu u furo meheraddiisa dhaqdhaqaaqa.
Wuxuu u sameeyay sawir -gacmeedyo dhowr ah oo loogu talagalay istuudiyahaas, oo ay ku jiraan Walaalaha Grunt, oo ka muuqday MTV. Si kastaba ha ahaatee, dadaalkiisii ​​ugu caansanaa waa Ed, Edd n Eddy, kaas oo ka baxayay Shabakadda Kartoonka muddo toban sano ah.
Wuxuu soo saaray bandhigga oo dhan istuudiyahiisa, Aka Cartoon, ee Kanada.
Ilaa Waqtiga Tacaburka uu dhaafiyey, kani wuxuu ahaa Bandhiggii ugu dheeraa ee Shabakada Kartoon. Shaqada Danny weli waxay ka mid tahay kuwa ugu wanaagsan suuqa, iyadoo leh muuqaal caan ah oo leh $ 3 milyan oo doolar.
Craig McCracken waa animator Mareykan ah oo muddo dheer ka soo shaqeeyay Shabakadda Kartoonka.
Waxa uu soo saaray bandhigyo badan laga soo bilaabo horraantii qarnigii kow iyo labaatanaad ee taageerayaasha kartoonku ogaan karaan, sida Gabdhaha Powerpuff iyo Guriga Foster ee Saaxiibada Khayaaliga ah. Sawir gacmeedyadiisa dhamaantood waxay leeyihiin qaab farshaxan oo isku mid ah oo aan iin lahayn.
Waa sida aad u kala saari karto sawir-gacmeedkiisa marka la eego. Waxa uu haystaa 1 milyan oo doolar oo saafi ah.
Eric Goldberg waa mid ka mid ah kuwa maanta caanka ah laakiin wali caan ku ah animators Disney. Si loo soo jeediyo inuusan caan aheyn halka isla marka la wada caan baxayo ay u muuqato oxymoron.
Si kastaba ha ahaatee, Goldberg wuxuu ka soo muuqdaa muuqaalo dhowr ah oo daaha gadaashiisa ah iyo qaar ka mid ah wareysiyo muuqaal ah oo si faahfaahsan uga hadlaya habka animation. Shaqadiisa Disney si weyn ayay u horumartay intii uu ku jiray xirfadiisa, maadaama istuudiyaha uu ka weeciyay diiradda saarista filimada 2D iyo dhanka 3D.
Dhab ahaantii, aasaaska animation-ka marna isma beddelo. Taasi waa bilicda shaqada Goldberg, wax badanna waad maqli doontaa haddii aad magaciisa ka raadiso YouTube-ka oo aad haysato qiimihiisu dhan $312,000.
Kumuu ahaa animator-kii ugu horreeyay? Miyuu ahaa Walt Disney?
In kasta oo “kuwa ugu horreeya” nooc kasta oo ay tahay ay adag tahay in la caddeeyo, J. Stuart Blackton wuxuu u muuqdaa inuu yahay animator-kii ugu horreeyay ee filim ku salaysan, isaga oo leh Wajiyadiisa Qosolka ah ee Wajiyada Quruxda leh 1906-kii oo bilaabay taxane aflaam ah oo firfircoon oo loogu talagalay Shirkadda Vitagraph ee hormoodka ka ah New York.
Maxay ahayd filimkii ugu horreeyay ee dhererkiisu muuqdo?
Barafka cad iyo Toddobada Dwarf, Walt Disney Animation Studios 'sawirkii ugu horreeyey ee muuqaal leh, ayaa la soo saaray 1937 -kii, iyada oo la galay xilli cusub oo madadaalada qoyska ah.
Maxay yihiin seddexda kartoon ee adduunka ugu da'da weyn?
Sidee kaneecada u shaqeysaa?
Goorma ayuu soo baxay animation-kii ugu horreeyay ee dhijitaalka ah?
Filimkii 1973 ee Westworld, oo ahaa filim khiyaali saynis ah oo uu qoray oo uu hagayey qoraa Michael Crichton oo ay aaladaha bani'aadamnimada ee bani'aadamku ku dhex nool yihiin aadanaha, ayaa ahaa filimkii ugu horreeyay ee muuqaal ah ee lagu daro farsamaynta sawirrada dhijitaalka ah.
Maxay yihiin shanta nooc ee animation-ka?
Jooji dhaqdhaqaaqa animation, animation 2D, animation 3D, animation dhaqameed iyo sawirada Motion.
Animation-ku waa goob shaqo oo cusub oo xiiso leh oo bixisa fursado badan oo kala duwan.
Shirkadaha sida istuudiyaha sawirrada dhaqdhaqaaqa, shirkadaha ciyaaraha, iyo wakaaladaha xayeysiinta, animators waxay ku soo saaraan sawir gacmeed ama adeegsiga kombuyuutarrada. Xayeysiisyada, filimada, ciyaaraha fiidiyowga, iyo taxanaha telefishanka dhammaantood ayaga ayaa soo saaray.
Animation waa qaab farshaxan casri ah oo leh fursado shaqo oo badan. Haddii aad had iyo jeer ku raaxaysan jirtay animation-ka, waxaad u rogi kartaa shaqo faa'iido leh!
15 Software -ka Tafatirka Fiidiyowga Bilaashka ah ee ugu Fiican ee loogu talagalay Android, PC -yada, macruufka, iyo Mac
21 Goobaha Liiska Shaqada ugu Fiican Heerka Gelitaanka 2022
Waxaa jira siyaalo badan oo ardayda ka qalin jabisay heerka gelitaanka ay daaha ka qaadi karaan siraha ka dambeeya shaqo la'aanta 2022. Mid ka mid ah siyaabahan waa iyada oo loo marayo liiska goobaha shaqo raadinta. Goobahan, waxaad ka heli doontaa shaqooyin badan oo aad ka dooran karto…
Maxay ka dhigan tahay in la raaco Jumladda? | Farqiga u dhexeeya Socdaalka iyo Cafiska
Waxaa laga yaabaa inaad la kulantay wadahadalo ku saabsan wararka ku saabsan isdhaafsiga iyo cafiska ama laga yaabee xitaa wada hadal...